Izikhonkwane zeLapel zoMlingo-iHlabathi leeAmulets
Ngokuchaseneyo namakhubalo kunye nemisesane esebenza kumandla akho obuqu kunye namandla omoya, izikhonkwane zebhekoni zisebenza kumandla abanye abantu. Xa abantu bedibana nawe kwaye bebona iphini, ingqalelo yabo itsalwa kuyo. Ngaloo mzuzu amandla ephini athatha isigqibo sokuba lo mntu uyafuneka ukugqiba umnqweno wakho. Ukuba akunjalo, loo mntu akayi kusebenzisana nawe. Ukuba impendulo nguewe, ufumene uncedo olukhulu.
Lo mntu uya kukunika uncedo, ulwazi, njl ... udinga ngaloo mzuzu ukuqhubela phambili kwinjongo yakho, umnqweno okanye umnqweno. Yicinge njengamatye okunyathela ayimfuneko endleleni. Iphinikhodi ayisoze isebenze ngokuchasene nentando yomnye umntu kodwa iya kwenza umntu azazi iimfuno zakho kunye namathuba akhe okanye apha okukunceda. Amandla aphuma ephinini aya kuvula ingqondo nentliziyo yabanye abantu abakwimeko egqibeleleyo ukukunceda.
I-Chakras Manipura-Isolar plexus chakra Lapel Pin
I-Ajna Chakra-Iliso lesithathu le-chakra Lapel Pin
I-Abraxas Magic Beacon Lapel Pin kunye neMimoya yeOlimpiki eyi-7
I-Astaroth Magic Beacon Lapel Pin yobuhlobo kunye nokuphilisa iingxaki zeemvakalelo
Mammon Money Magic Beacon Lapel Pin ngobuninzi kwimicimbi enxulumene nemali
I-Lucifer Magic Beacon Lapel Pin ukuphuma ebumnyameni
I-Asmodeus Magic Beacon Lapel Pin yabangcakazi kunye nemali
Abathanda iMagic Beacon Lapel Pin yokufumana kunye nokugcina uthando lobomi bakho
I-Money Magic Beacon Lapel Pin ngobuninzi kwimicimbi enxulumene nemali
Amalungu e-Illuminati i-lapel pin
I-Om Mani Padme Hum i-lapel pin-iBuddhist Mantra Enamel Pin Ibheji
Izikhonkwane ezininzi zeelapel
IIMPAZAMO OKUMELE UZIPHEPHE
Imiphumo yephini iphantse ngokukhawuleza. Ngokukhawuleza xa umntu ebona iphini, isenzo sisiphumo. Okukhona unxiba ipini, kokukhona kulula ukufumana iziphumo emva kweziphumo. I-drawback kuphela kukuba amandla e-pin anqunyelwe ngexesha. Okukhona uyibhenca ngakumbi kwabanye abantu, kokukhona amandla ayo esiba namandla. Kwiimeko eziqhelekileyo amandla ayo ahlala malunga neenyanga ezili-9 ukuya kunyaka o-1. Emva koko iya kuba yintsimbi nje entle engenamandla omlingo. Ayinakuhlawuliswa kwakhona okanye ilungelelaniswe kwakhona
I-pin ubukhulu: 25mm eyenziwe nge-zamak kunye ne-enamel ekumgangatho ophezulu
Zonke izikhonkwane zihlawuliswa ngamandla omoya
Iphini elenziwe ligcisa lobucwebe elidumileyo uAdrian Del Lago
Ungazikhusela njani kuhlaselo lomlingo?
Isithethe esinamandla sokuKhusela ngokuchasene nokuhlaselwa ngomlingo nangokomoya
Isithethe sothando esinamandla ukutsala umntu ofanelekileyo, ukulungisa ubudlelwane kunye nokubopha isithandwa
IiNzuzo zokuNxiba amakhubalo
Isiko lokubophelela abantu kwiprojekthi yakho okanye kuwe